Woodfuel & charcoal Review-Miyuki I... by World Agroforestr... 1987 views
Myanmar Education for English
1. Myanmar Good Attitude to Reform Country အမှတ်(၁) eBook 22-Apr-2014 - ဦးအဂ္ဂ(တောင်ငူ) အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ တောင်ဥက္ကလာ - ILBC ဦးတင်မောင်ဝင်း မြန်မာ့ပညာရေး-ကမ္ဘာ့အဆင့်သို့ - USA နှင့် ကမ္ဘာ့သက္ကသိုလ်များ ပညာသင်ဆုနှင့် မြန်မာကျောင်းသားများ - ဘာသာရေး မော်လမြိုင်၊ ဝင်းစိန်တောရ - ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရုပ်ပွားတော်နှင့် မြန်မာ့အလှုဒါနကုသိုလ် - အမေရိကန်၊ အီးယူနှင့်ဂျပန် မူပိုင်ခွင့် US Patents - ရွှေဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းနှင့် အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံတော် - အမေရိကန်သမ္မတလင်းကွန်းနှင့် လက်ရှိမြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်
2. Myanmar Good Attitude to Reform Country စာရေးသူ၏အမှာစာ ရန်ကုန်မြို့သို့အလည်လာခိုက် ပျက်စီးယိုယွင်းသွားသော ရန်ကုန်မြို့တော်ကို မြင်ရသော်လည်း လူငယ်မြောက်များစွာ သစ်လွင်သော စိတ်ထား၊ ခွန်အား၊ ဥာဏ်ပညာ၊ ဖြင့် စောင့်ကြိုနေသည်ကို ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တွေ့ရပါသည်။ ထိုလူငယ်များကို Good Attitude Myanmar ဟု ကင်ပွန်းတပ်လိုပါသည်။ လူကြီးမြောက်မြားစွာလည်း အလားတူ တွေ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် အစိုးရလူကြီးမင်းများသည် အထူးအရေးကြီးလှသည်။ သူတို့သည် နိုင်ငံတော်အာဏာ နှင့် သံယံဇာတများကို တိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အသုံးပြုနေကြသည်။ သံယံဇာတများတွင် အကောင်းဆုံးမှာ လူသားအရင်းအမြစ် Human Resource ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား လူငယ်၊လူကြီးများအတွက် ပညာရေးတွင် လောကီပညာ(အတန်းပညာ)နှင့် လောကုတ္တရာပညာ (ဘာသာရေး) ၂ခုကို သင်ကြားပို့ချနေသူ များစွာရှိသည်။ ဦးအဂ္ဂနှင့် ILBC ဦးတင်မောင်ဝင်းကဲ့သို့ လူကြီးများစွာရှိနေသော မြန်မာပြည်အတွက် ရွင်လန်းဝမ်းမြောက်မှုရှိပါသည်။ အမြဲသတိရ၊ လုပ်ဆောင်သွားရန် - မိမိကိုယ်ကိုယ် ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည် - မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို ကောင်းအောင် လမ်းပြနိုင်သော လမ်းပြကြယ် လူငယ်၊ လူကြီးများကို အထူးကျေးဖူးတင်ကြောင် ဇော်အောင် (မုံရွာ) ၂၃-ဧပြီ-၂၀၁၄
3. 4/21/2014 ဆရာေ◌တာ◌်ဦးအဂ္ဂ http://mingalaronline.biz/stories/uagga.english.htm 1/7 ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂ(တောင်ငူ) - ၁၃နှစ်မြောက် ပါရမီနိုင်ငံတကာအဆင့်မီအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းများ ရန်ကုန်မြို့၊ တောင်ဥက္ကလာပမှာ ပါရမီ-နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဖွင့်ထားတဲ့ ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂဆီကိုအလည် အပတ် ရောက် သွားပါတယ် ။ Good Attitude Myanmar ဆောင်းပါးအတွက် ပညာဒါနပြုနေသူသာသာပြုမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ် ။ စာမျက် နှာ ၉၃၅ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်နဲ့ The Best Questions အင်္ဂလိပ်စာလိုက် စားသူများနှင့်အင်တာဗျူးဖြေလိုသူများအတွက် မေးခွန်း၊အဖြေများ စာမျက် နှာ၂၉၆ စာအုပ်၂အုပ်ကိုဝယ် ယူပြီး၊ လေ့ လာခဲ့ပါတယ် ။ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလည်းဖြစ်၊ ကလောင်အမည် မိုးသု(မန္တလေး)ရဲ့ မရေးဝံ့၊ မရေးရဲပဲ the Voice သတင်းစာမှာ ၂၀၁၄မှာ ရေးသားထားတဲ့ ရဟန်းသဃာကိုဝေဖန်ကောင်းပါသလား ဆောင်ပါးနဲ့ အခြားဆောင်းပါးပေါင်း ၂၂ခုပေါင်းချုပ်စာအုပ်မှာ ပညာဒါနအကြောင်း အသေအချာရေးထားပါတယ် ။ ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ တိုင်းပြည် မှာ ဘုရားတွေများလှပါပြီး၊ ဘုရားထပ်တည် ခြင်းထက် ပညာဆိုတဲ့ အရာ တိုင်းပြည် အတွက် ဆား လိုအပ်တယ် ..ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ် ။ လောကီပညာနဲ့လောကုတ္တရာပညာများအကြောင်း ဘုန်းကြီးကိုယ် တိုင် တရားသဘောရှုဒေါင်ကမှရေးထားပါတယ် ။ ပညာဥာဏ် ဖြင့်လှုဒါန်းပါ ..ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ဒကာ၊ ဒကာမများက ဘုရားတည် ပြီးလှုချင်လို့ အကြံတောင်းလာသူများကိုဘုရားမတည် ဖို့၊ မြန်မာပြည် မှာ စေတီပုထိုးတွေမနည်းလှပါဘူး။ ထပ်မတည် သင့်ပါဘူး။ ဘုရားဒယကာ၊ ဒါယကာမ ဖြစ်လိုသူများအတွက် အကုန်ကျ နည်းတဲ့ အရိပ်ပေးတဲ့ ဗောဒီညောင်ပင်တွေ စိုက် ဖို့၊ သံဃာများကိုလှုဒါန်းခြင်းလိုပဲ ကျောင်းပညာ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကျောင်းသားများကိုပညာသင်ပေးဖို့ လှုဒါန်းခြင်းများလုပ်ဆောင်ကြဖို့၊ ဒီလိုလှုဒါန်းခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့လည်းကုသိုလ် ရ၊ ဆင်းရဲချို့တဲ့ သူများကိုလည်းမိမိအလှုကိုအမီပြုပြီး ကောင်းကျိုးခံစားကြတာမို့ အလွန်မွန်မြတ် လှပါတယ် ။ ကုသိုလ် ပြုတဲ့ အခါမှာ မိမိလည်းကုသိုလ် ရ၊ ပတ် ဝန်ကျ င်လည်းမိမိအလှုဒါနရဲ့ အကျိုးခံစားရတဲ့ ကုသိုလ် မျိုး ပြုတာက အကောင်းပါပဲ။ ဘုရားဒကာနာမည် ခံချင်လို့ကတော့ အုတ် စေတီမတည် ပဲ ဗောဓိပင်စိုက် ပျိုးခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ လို့ဖေါ်ပြထားပါတယ် ။
4. 4/21/2014 ဆရာေ◌တာ◌်ဦးအဂ္ဂ http://mingalaronline.biz/stories/uagga.english.htm 2/7 ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂဟာ ၁၃နှစ်တိုင်အောင် ပညာဥာဏ် ဖြင့်လှုဒါန်းနေတဲ့ အလွန်လေးစားဖွယ် ရာ ဆရာတော် တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ် ။ အသက် ရွယ် ငယ် ရွယ် တဲ့ ဆရာတော် ဟာ လောကပညာရပ်များကိုအထူး၊ တစိုက် မတ် မတ် သင်ကြားနေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါပြီ။ တောင်ဥက္ကလာ ဆရာတော် ရဲ့သင်တန်းကျောင်းကို ရောက် ချိန်ကတော့ သင်္ကြန်ပြီးချိန်ဖြစ်လို့ သင်တန်းဆရာ၊ ကျောင်းသားများ ကျောင်းပိတ် ရက် ဖြစ်လို့ ဆရာတော် နဲ့ အေးဆေးစွာ၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ English Speaking For Everyone (2006 - 935pages) & Lets speak English happily (296 pages) အမေးအဖြေအဖြစ် တင်ပြလိုက် ပါတယ် ။ မေး။ ဆရာတော် ခင်ဗျ၊ ဒီ၆ထပ်တိုက် အဆောက် အဦကြီးနဲ့သင်တန်းသား တစ်ထောင်ကျော် သင်တန်းကြီ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုအကျ ဉ်းပြောပြပေးပါခင်ဗျ။ အဖြေ။ ဒီကျောင်းကိုဆောက် တည် ခြင်းဟာ သင်တန်းသားများ၊ သင်တန်းဆရာများရဲ့ပါဝင်၊ ကူညီ၊ လှုဒါန်းမှုများကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ သင်တန်းကိုပထမဆုံး ဘုန်းကြီးကိုယ် တိုင် အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်ကြားပေးပါတယ် ။ နောက် မှသင်တန်းသားများထဲက ဝါသနာပါ၊ ထူးချွန်သူများက သင်တန်းဆရာများ ဖြစ်လာပြီး၊ သင်တန်းလည်းပိုပြီးအောင်မြင်လာပါတယ် ။ သင်တန်းလက် ကမ်းစာစောင်တွင်ရေးသားထားသည် မှာ.. သင်တန်းများနှင့်ဆရာများစာရင်းတွင် ဆရာဦးဇေယျ ၊
5. 4/21/2014 ဆရာေ◌တာ◌်ဦးအဂ္ဂ http://mingalaronline.biz/stories/uagga.english.htm 3/7 ဆရာမမစန္တာ၊ ယမင်းသူ၊ ဆရာမယွန်းမြန်မာ၊ ရတနာဝင်း၊ ဆရာမိုရ်ရီ၊ ဆရာမသော် တာဝင်း၊ မြတ် ကေခိုင်၊ ဆရာမရတနာပြည် စုံ၊ ပြည့် ပြည့် ဖြိုး၊ ဆရာမမြည် မြည် အေး၊ ဆရာဝင်းဇော် ထွန်း၊ ဆရာမသိင်္ဂီကျော် ၊ ဆရာမယဉ်မင်းပိုင်၊ ယဉ်မင်းသူ၊ မေသစ်ငြိမ်း၊ ဆရာမနန်းဒီပပထွန်း၊ ဆရာမမေဇင်၊ ဆရာဦးတေဇ ၊ ဆရာမခင်ဇော် ထက် ၊ ဆရာမဇူလိုင်မြင့်၊ ဆရာမခင်ကြည် ကြည် ဝင်း၊ ဆရာမမေနှိုင်း၊ ဆုလဲ့ ရည် ထူး၊ ခိုင်ဆည်းဆာ။ ခိုင်မွန်အေး၊ စိုးစန္တာဦး၊ အိဖြိုးသွယ် ..၊ စသည် တို့ဖြစ်သည် ။ အခြေခံအဆင့်မှတက် ရောက် သူတိုင်းကိုအံ့ သြဘွယ် လောက် ထိအဆင့်မြင့်ရောက် အောင် စနစ်တကျ သင်ကြားပေးသော ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂရဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းစနစ် (၃)လအတွင်း တစ်ပတ် (၂)ရက် ၊ တစ်နေ့ (၃)နာရီအချိန်ပေး၊ လေ့ ကျ င့်သင်ကြားပို့ချပါသည် ။ နိုင်ငံခြားသွားလိုသူများ၊ ဆရာ/ဆရာမ ဖြစ်လိုသူများ၊ Tourist Guide လုပ်လိုသူများ၊ ၃လအချိန်ပေးရုံဖြင့် အံ့ သြဘွယ် ကောင်းလောက် အောင် ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရရှိစေတဲ့ သင်တန်းကျောင်းဖြစ်သည် ။ မေ။ ဆရာတော် တို့ရဲ့ သင်တန်းများအမျိုးအစားများကိုပြောပြပေးပါခင်ဗျ အဖြေ။ သင်တန်းကတော့ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း ဦးစားပေးပါတယ် ။ ဘုန်းကြီးကိုယ် တိုင် ဦးစီးပြီး၊ ဘုန်းကြီးကိုယ် တိုင် သင်ပေးပါတယ် ။ သင်တန်းသားများက ထွက် ပေါ်လာတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ များစွာကတဆင့် ၁၃နှစ်တာကလာအတွင်း သင်တန်းများစွာ တိုးပွားလာပါတယ် ။ အဓိကတော့ (၃)လ အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းဖြစ်ပါတယ် ။ ၃လအတွင်း သင်ကြားချက် များကိုအိမ်၊ အလုပ်တွေမှာ လေ့ ကျ င့်၊ ကျ က် မှတ် ၊ ပြောကြားနိုင်ရင် အံ့ သြဘွယ် ကောင်းအောင် စကားပြောတတ် လာမယ် ဖြစ်ပါတယ် ။ သင်တန်းကိုအဆင့်မြင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းမှာ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောဆိုသင်ကြားပါတယ် ။ အခြေခံသင်တန်းမှာတော့ မြန်မာလို၊ အင်္ဂလိပ်လိုရောပြီးသင်ပါတယ် ။ သင်တန်းစာအုပ်များကိုကိုးကားပြီး သင်တန်းဆရာက သူကြိုက် နှစ်သက် သလိုသင်ပါတယ် ။ သင်တန်းခန်းအများစုကတော့ လူတစ်ရာလောက် ဆန့်ပါတယ် ။ အထူးခန်းများမှာတော့ လူ၂၀လောက် အထူးသီးသန့်ဝိုင်းသင်တန်း အခန်းများရှိပါတယ် ။ သင်တန်းအမျိုးအစားများကတော့ အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံ(၃)လသင်တန်း၊ Special English Training Class (အခြေခံမှစပြီးသင်ကြားခြင်း)၊ Special Training Class Level (2)၊ တနင်္ဂနွေတရာက် သာတက် လိုသူများသင်တန်း၊ စနေ-တနင်္ဂနွေ တစ်ပတ် ၂ရက် တက် လိုသူများသင်တန်း၊ တနင်္လာ-အင်္ဂါသင်တန်း၊ ဗုဒ္ဓဟူ-ကြာသပတေး-သောင်္ကြာသင်တန်း၊ သံဃာတော် များ၊ သီလရှင်များ၊ အခြေခံမရှိသူများ သင်တန်း၊ ပါရမီ-တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း(အခမဲ့)၊ အခြေခံတက် ပြီးသူတိုင်းအတွက် Free Intermediate အတန်းများ၊ နိုင်ငံခြားသွားအနီးကပ်အမြန်(၁)လသင်တန်း စသည် တို့ဖြစ်ပါတယ် ။ အင်္ဂလိပ်စာအပြင် အခြားသင်တန်းများကတော့ LCCI level 1,2သင်တန်းများ၊ ကွန်ပြူတာပရိုဂရမ်သင်တန်း၊ ကွန်ပြူတာပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း၊ DTP သီးသန့်၂လပြတ် သင်တန်း၊ Advanced Excel Course သီးသန့်သင်တန်း၊ ပါရမီ၁၂နှစ်ပြည့် -အထူးဗေဒင်သင်တန်း၊ နွေရာသီ(၅၊၆၊၇၊၈)တန်းများအတွက် သင်တန်းများ၊ လူကြီးတန်းများ စသည် တို့ဖြစ်ပါတယ် ။
6. 4/21/2014 ဆရာေ◌တာ◌်ဦးအဂ္ဂ http://mingalaronline.biz/stories/uagga.english.htm 4/7 ရိုးရိုး အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုတော့ လာရောက် စာရင်းပေးပြီး ဖွင့်နေဆသင်တန်းကိုကြားဖြတ် ၊ ချက် ချင်းတက် နိုင်ပါတယ် ။ သင်တန်းအစက တက် နိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ အခြေခံမရှိသူများအတွက် ပိုပြီးကောင်းပါတယ် ။ အခြေခံရှိပြီးသူများတော့ ကြားဖြတ် တတ် နိုင်ပါတယ် ။ အဆင့်မြင့်သင်တန်းများကိုတော့ ကြားဖြက် တက် လို့မရပါဘူး။ ကြိုတင်စာရင်းပေးပြီးမှတက် နိုင်ပါတယ် ။ မေး။ စင်ကာပူမှလည်းပညာဒါန pyanardana.com အင်္ဂလိပ်စာနဲ့နည်းပညာသင်တန်းများ ၁၅ယောက် ဝိုင်းများ ပြုလုပ်နေတာ ၃နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ စင်ကာပူက ဆရာများ၊ ဝါသနာပါသူများနဲ့ နိုင်ငံတကာက လူမျိုးခြားဆရာများ လာရောက် သင်ကြားလိုရင် စီစဉ်ပေး၊ အခန်း၊ အချိန်ပေးနိုင်ပါသလားခင်ဗျ အဖြေ။ အရင်က သြဇီလူမျိုးတစ်ဦး သြစတြေးလျားက လာရောက် ပြီး၊ ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းကို လာရောက် သင်ကြားပေးခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အခုသူပြန်သွားပါပြီ။ အလားတူစင်ကာပူက လာရောက် သင်ကြားပေးမယ် ဆိုရင် ဝမ်းမြောက် စွာနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ် ။ သူတို့က အချိန်ပိုင်းလား၊ ပုံမှန်အပတ် စဉ် လာသင်ပေးနိုင်မလား၊ စနေ-တနင်္ဂနွေပဲလာကြမှာလား၊ ဘယ် လိုသင်ပေးမလဲ ဆိုတာတော့ ရှိပါတယ် ။ ပါရမီက သင်တန်းစာအုပ်များကိုပဲ ကိုးကားပြီး၊ သူတို့နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံများကို ပေါင်းစပ်သင်ကြားပေးနိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ် ။ ဟိုး.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်ကျော် ကတော့ လူမျိုးခြားများလာရောက် ၊ မေးမြန်း၊ စုံစမ်းခြင်းများကိုအားမပေးပါဘူး။ သူတို့လာမေး၊ လာသွားပြီးရင် သက် ဆိုင်ရာက လာရောက် စစ်ဆေးမေးမြန်းခံရတဲ့ အတွက် အချိန်ကုန်၊ စိတ် ပျက် ရပါတယ် ။ အခုတော့ လူမျိုးခြား၊ အနောက် နိုင်ငံသား၊ ဂျပန်၊ သြစတြေးလျား စသည် တို့ လာရောက် ရင်လည်းပြသနာမရှိတော့ ပါဘူး။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားက ဝါသနာပါသူများ၊ မြန်မာများကို အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကူညီသင်ပြပေးလိုသူများကိုနွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် ။ မြန်မာပြည် က ဆရာ၊ ဆရာမများနဲ့ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာများ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်၊ သင်ကြားရင်း ဗဟုသုတဖလှယ် နိုင်ပါတယ် ။ မေး။ သင်တန်းခွဲများ ရန်ကုန်မြို့ထဲ (သို့မဟုတ် ) ဘုန်းကြီးရဲဇတိတောင်ငူမြို့လိုနေရာမျိုးမှာ ဖွင့်ဖို့အစီစဉ်ရှိပါသလား အဖြေ။ သင်တန်းသားအရေအတွက် တော့ အရင်ထက် စာရင် နည်းသွားပါတယ် ။ ပြင်ပမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများစွာ ပေါ်ပေါက် လာတာရယ် ။ အဓိကတော့ ဘုန်းကြီးတို့ တောင်ဥက္ကလာကိုမြို့ထဲက လာဖို့ ဘတ် စကားအသွားအလာ ခက် ခဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ သင်တန်းသားသယ် ယူပို့ဆောင်လုပ်ငန်း ရှိလာရင်တော့ သင်တန်းသားပိုများလာမှာပါ။ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ ပါရမီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းခွဲများ မလုပ်သေးပါဘူး။ ဘုန်းကြီးကိုယ် တိုင် နိုင်နင်းအောင် လုပ်နိုင်ဖို့ပဲ ဦးစားပေးတဲ့ အတွက် တောင်ဥက္ကလာပ တစ်နေရာတည်းမှာပဲ သင်တန်းဖွင့်ပါတယ် ။ နောင်တချိန်တော့ သင်တန်းခွဲများ ရန်ကုန်မြို့လည် မှာ ဖွင့်ကောင်းဖွင့်နိုင်ပါမယ် ။ အခုတော့ မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။
7. 4/21/2014 ဆရာေ◌တာ◌်ဦးအဂ္ဂ http://mingalaronline.biz/stories/uagga.english.htm 5/7 မေး။ ဆရာတော် တို့ ကျောင်းကြီးက တော် ကြီးကြီးကျ ယ် ပါတယ် ။ ဒီနေရာတစ်ဝိုက် မှာ အမြင်ဆုံးဖြစ်ပြီး အခု အပေါ်ဆုံးထပ်ကနေ လှပတဲ့ ၊ ပတ် ဝန်းကျ င်ရှုခင်းများကိုကြည့် နိုင်ပါတယ် ။ ဘယ် လိုစီမံခန့်ခွဲပြီး၊ လှုဒါန်းငွေများနဲ့ တည် ဆောက် ခဲ့ပါသလဲ။ အဖြေ။ ဒီအဆောက် အဦကတော့ အထူးသခြင့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းဆရာများရဲ့ ပါဝင်လှုဒါန်း၊ သင်တန်းကြေးများက အဓိကအဖြစ် သုံးစွဲတည် ဆောက် ပါတယ် ။ အပြင်က စေတနာရှင်လှုဒါန်းသူများစွာလည်းရှိပါတယ် ။ ပညာဒါနအတွက် လှုဒါန်းသူများနဲ့ တည် ဆောက် ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ တောင်ဥက္ကလာ အခုနေရာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၀နှစ်ကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းများစွာကိုတစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်း၊ နေရာချထားပေးတဲ့ အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းအားလုံး၊ ကိုယ် ပိုင် ဒယကာ၊ ဒယကာမများရဲ့ ထောက် ပံ့၊ လှုဒါန်းမှုနဲ့ ရပ်တည် ကြတယ် ။ ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းလည်းဒီလိုပဲ၊ ပညာဒါနပြုလိုသူသင်တန်းသား၊ ဆရာဆရာမများ၊ စေတနာရှင်များရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ ရပ်တည် ပါတယ် ။ မေး။ ဘုန်းကြီးတို့ ပါရမီသင်တန်းကျောင်းကိုခေတ် မီကွန်ပြူတာ၊ အင်တာနက် အသုံးပြုတဲ့ သင်တန်း၊ IELTS, TOFEL စတဲ့ ပြည် ပတက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်သင်တန်းလိုမျိုး အဆင့်မြင့်လာအောင် အစီအစဉ်ရှိပါသလား။ ကွန်ပြူတာစနစ်၊ ပစ္စည်းများ၊ လုပ်အားပေးများ၊ ပညာရှင်များက အကူညီပေးလာရင် လက် ခံဘို့ မူဝါဒရှိပါသလား။ အဖြေ။ နိုင်ငံခြားအကူညီများ၊ ပစ္စည်း၊ ကွန်ပြူတာများ ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ် ။ ကွန်ပြူတာအခြေပြုသင်တန်းအဖြစ်တော့ လုပ်ဖို့မလွယ် သေးပါဘူး။ သင်တန်းသားက တစ်ထောင်ကျော် တော့ ကွန်ပြူတာသုံးနိုင်သူလူတန်းစားတွေ နည်းပါတယ် ။ လုပ်ချင်ပေမဲ့ နည်းပညာနဲ့ပစ္စည်းအခြေအနေ မပေးသေးပါဘူး။ ထောက် ပံ့ကူညီသူများ ရှိရင်တော့ ဝမ်းမြောက် စွာ၊ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလိုပါတယ် ။ မေး။ အခုခေတ် မှာ စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓတရားများကိုသင်တန်းအစ၊ ၅မိနစ်ဖြစ်စေ ပို့ချ၊ ပြောကြားမှုတွေ လုပ်ပေးပါသလား။ စာရိတ္တပညာကိုအစိုးရကျောင်းများ၊ ဘုန်းကြီးစာသင်ကျောင်းများက ပို့ချနိုင်မှ တိုင်းပြည် လူထုရဲ့ စရိုက် ကောင်းများ အမြန်ဆုံးပြန်လည် တိုးတက် မယ် လို့ ယုံကြည် တဲ့ အတွက် မေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အဖြေ။ ဟုတ် ကဲ့ ၊ သင်ကြားပေးပါတယ် ။ ဘာသာရေးပို့ချချက် များကိုအနည်းငယ် ၊ ဖြည့် ဆွတ် သင်ကြားပို့ချပေးပါတယ် ။ စာရိတ္တပညာဟာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ လူ့ကျ င့်ဝတ် များကိုကျောင်းသားများအပေါ် အလျ င်းသင့်သလိုသင်ကြားပါတယ် ။ ကျောင်းသားတွေက ဘာသာရေးချည်းသင်ပေးရင် ငြီးငွေ့လာတတ် လိုအချိန်ပြည့် ဘာသာရေးသင်တန်းများတော့ မလုပ်ပါဘူး။ တရားစခန်းများစွာရှိတဲ့ အတွက် ဘာသာရေးစိတ် အားထက် သန်သူများ အဲဒီတရာစခန်း၊ တောရစခန်း
8. 4/21/2014 ဆရာေ◌တာ◌်ဦးအဂ္ဂ http://mingalaronline.biz/stories/uagga.english.htm 6/7 နေရာများမှာ သင်ကြား၊ ကျ င့်စဉ်လုပ်နိုင်ပါတယ် ။ ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ လောကပညာ၊ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းကိုဦးစားပေးပါတယ် ။ မြန်မာများဟာ နားထောင်ခြင်း Listening အားနည်းလှပါတယ် ။ ရေး၊ ဖတ် ခြင်းမှာတော့ အားကောင်းပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသားက ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကိုနားလည် မှုအားနည်းပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားကိုအလုပ်သွားလုပ်သူများ ပထမဆုံး ပြသနာကတော့ သူတို့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆို၊ လုပ်ခိုင်းတာကိုနားမလည် တော့ ပြောတာတခြား၊ လုပ်တာတခြား ဖြစ်သွားရင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ၂ဖက် စလုံး နစ်နာပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားရောက် ပြီး ယဉ်ကျေးမှု၊ စားဝတ် နေထိုင်မှုမတူညီလို့ စိတ် အားငယ် ချိန်၊ အလုပ်လုပ်ရာမှာ အင်္ဂလိပ်စကားနားမလည် ရင် ပိုဆိုးပါတယ် ။ မြန်မာအချင်းချင်း အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာတော့ နားလည် ပေမဲ့၊ နိုင်ငံခြားသားပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုနားလည် ဖို့ ခက် ပါတယ် ။ ဘုန်းကြီးတို့ သင်တန်း၃လသင်တန်းကိုစိတ် ရော၊ကိုယ် ပါ တက် ပြီး၊ လေ့ ကျ င့်နားထောင်ပြီးရင်တော့ နိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်မဲ့ မြန်မာများ အင်္ဂလိပ်စကား နားထောင်မှု အံ့ မခန်းတိုးတက် လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြည် တွင်းလာရောက် သူတိုးရစ်နဲ့အလုပ်ရှင်များ ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကိုကောင်းစွာနားလည် ပြီး၊ ပြန်လည် ပြောတတ် ခြင်းအားဖြင့် ပြည် တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအဖြစ် အောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ။ မေး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘုန်းဘုန်းရေ။ ဘုန်းကြီးတို့လိုပညာဒါနလုပ်ငန်း အောင်မြင်ကြီးပွားလာလေလေ နိုင်ငံတိုးတက် လေလေပါပဲ။ အထက် ပါ အမေးအဖြေများသည် ။ ဘုန်းတော် ကြီး ဦးအဂ္ဂနှင့်တွေ့ဆုံ၊ မေးမြန်း၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ ကောက် နုတ် ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ သင်တန်းမှုး ဆရာဦးအဂ္ဂနှင့်တွေ့ဆုံပေးသော ရန်ကုန်-စင်ကာပူ-ဒူဘိုင် ကောင်လာဘ် စံ ပြည် ပအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီမှလုပ်ငန်းရှင် ဒေါ်ဌေးဌေးယုစံကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် ။ ဆရာတော် ဦအဂ္ဂဦးစီးသော အင်္ဂလိပ်စကားပြောနှင့်အခြားသင်တန်းများ တက် ရောက် လိုသူများ၊ ဆက် သွယ် လူသူများ၊ လှုဒါန်းလိုသူများအတွက် လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ် များ မြစည်းခုံကျောင်းနှင့် ဇောတိကာရုံပါရမီသင်တန်းကျောင်းသစ်၊ အမှတ် (၃)ဝိုင်း၊ ပါရမီလမ်း၊ ဘေလီတံတာအနီး၊ ပင်းယမှတ် တိုင်ရှေ့၊ တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ တယ် လီဖုန်း။ 09 5251035 09-418167142 09-420027664 09-31260480 ဇော် အောင်
9. 4/21/2014 ဆရာေ◌တာ◌်ဦးအဂ္ဂ http://mingalaronline.biz/stories/uagga.english.htm 7/7
10. 4/22/2014 ILBC ဦးတင်ေ◌မာင်ဝင်◌း - ◌မြာ့ပည http://mingalaronline.biz/stories/ilbc.tinmaungwin.htm 1/6 ILBC ဦးတင်မောင်ဝင်း - မြန်မာ့ ပညာရေးကိုကမ္ဘာ့ အဆင့်မြှင့်တင်နေသူတစ်ဦး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅နှစ်လောက် က ရန်ကုန်စက် မှုတက္ကသိုလ် ၊ အီလက် ထရွန်းနစ်ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းဆင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ။ ၁၀နှစ်တာကာလအတွင်း အလုပ်မျိုးစုံလုပ်ခဲ့ပါသည် ။ မှတ် မှတ် ရရ အခုခေတ် ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ စင်ကာပူကျွ န်းနိုင်ငံလေးကို အလုပ်ရှာဖို့ ၁၉၈၉ခုနှစ်က ရောက် ခဲ့ပြီး၊ အဲဒီအချိန်ကာလက လစာ ဒေါ်လာ၁၅၀၀ အလုပ်အကိုင်ကို သိပ်မခဲယင်းပဲ ရရှိခဲ့ပါသည် ။ စင်ကာပူကိုရောက် လာပြီး တစ်ပတ် အတွင်းမှာ အလုပ်အင်တာဗျူးသွားချိန် အင်္ဂလိပ်စကား ကောင်းစွာပြောနိုင်တဲ့ ကိုတင်မောင်ဝင်း အသက် ၂၈နှစ်အရွယ် ကိုအလုပ်ရှင် သဘောကျ ပြီး ချက် ချင်းခန့်လိုက် သဖြင့် စင်ကာပူတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးဖြစ်သည် ။ အင်ဂျင်နီယာပညာနဲ့အလုပ်ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ရင်း သက္ကရာဇ်၂၀၀၀ ကာလရောက် ချိန် သားတစ်ယောက် ၊ သမီးတစ်ယောက် ကလေး၂ယောက် ဖခင်ဖြစ်နေတဲ့ ဦးတင်မောင်ထွန်း၊ ILBC ကျောင်းကိုတစိုက် မတ် မတ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ။ ကျောင်းဆရာများလစာငွေ၊ ကျောင်းမြေနေရာအခက် ခဲ၊ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်မှုများဖြင့် ခယောင်းလမ်းကိုကြမ်းတမ်းစွာလျှောက် လှမ်းခဲ့ရသည် ။ ယခုအစိုးရသစ်လက် ထက် တွင် အလွန်များပြားစွာပေါ်ပေါက် လာသော အင်္ဂလိပ်စာသင် ကျောင်းများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ကမ္ဘာ့ အဆင့် အရည် အသွေး Quality ထိမ်းသိမ်းထားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုသာ ရှိသည် ။ ထို့ကြောင့် အဓိက သင်ကြားပေးသော ဆရာ၊ ဆရာမများကိုအထူးသင်တန်းပေးပြီး၊ တင်းကြပ်သော စာမေးပွဲစနစ်ဖြင့် ဆရာများကိုစကာတင်ရွေးချယ် ခဲ့သည် ။ ဆရာများကိုလည်းထိုက် တန်သည့် လစာများကို
11. 4/22/2014 ILBC ဦးတင်ေ◌မာင်ဝင်◌း - ◌မြာ့ပည http://mingalaronline.biz/stories/ilbc.tinmaungwin.htm 2/6 ပေးပြီး၊ ကျောင်းကိုသစ္စာရှိစွာလုပ်ကိုင်ရန်၊ ဆရာကောင်းပီသရန် အုပ်ချုပ်ခဲ့ရသည် ။ မြန်မာများ အင်္ဂလိပ်စာတတ် ရင် အလုပ်အကိုင်နဲ့၊ ကမ္ဘာ့ ပညာရေးကိုလိုက် မီမယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည် ချက် နဲ့ ILBC အင်္ဂလိပ်စာကျောင်းကိုစတင်ခဲ့သည် ။ အခုအချိန်မှာတော့ ဦးတင်မောင်ဝင်းဆိုရင် တီဗီအင်္ဂလိပ်စာပို့ချသူ၊ မြန်မာ့ ပညာရေးကို ကမ္ဘာ့ အဆင့်ရောက် အောင် ကြိုးစားနေသူ၊ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမှာ ပါဝင်ကူညီနေသူဖြစ်သည် ။ အမေရိကန်တက္ကသိုလ် ကြီးများနဲ့ ချိတ် ဆက် ပြီး၊ အမေရိကန်သင်ကြားမှုSyllabus အသုံးပြုခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းများကိုမြန်မာနိုင်ငံမြို့ကြီး ၈မြို့တို့တွင် ကိုယ် ပိုင်အဆောက် အဦ၊ ကျောင်းဆရာမများနှင့် သင်ကြားပို့ချနေသော အောင်မြင်သည့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ။ မြန်မာပြည် တွင် မြို့ကြီးများစွာ ဆက် လုပ်လုပ်ကိုင်လိုသော် လည်း၂၀၁၂နောက် ပိုင်း အိမ်မြေခြံဈေးကြီးမှု ဂယက် ကြောင့် နေရာအခက် ခဲဖြစ်လာသည် ။ ထို့အပြင် ရှိယင်းကျောင်းများကိုဆက် လက် တိုးချဲ့ရေး လုပ်ငန်းများစွာ ရှိနေသောကြောင့် မြို့ကြီးများတိုးချဲ့မှုမလုပ်တော့ ပါ။
12. 4/22/2014 ILBC ဦးတင်ေ◌မာင်ဝင်◌း - ◌မြာ့ပည http://mingalaronline.biz/stories/ilbc.tinmaungwin.htm 3/6 အဓိကသင်တန်း၂မျိုး ရေတိုဥပမာ နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ၊ ၃လသင်တန်းများ စသဖြင့် ရေတိုအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများစွာ ရှိသည် ။ အလုပ်ကိုင်အတွက် လိုအပ်သူများ၊ ကျောင်းဆရာလုပ်လိုသူများ၊ ဘာသာပြန်၊ စကားပြန်လုပ်လိုသူများစွာ တက် ရောက် ခဲ့ကြသည် ။ တက် သူများ အကျိုးများစွာ ဖြစ်ထွန်းကြပါသည် ။ ရေရှည် အတွက် ကမ္ဘာ့ တက္ကသိုလ် များသို့ ပေါင်းကူးပို့ပေးရေးအတွက် GCE "O" level, Junior college ၁၁တန်း၊ ၁၂တန်း စသည့် ကျောင်းများရှိသည် ။ ၁၂တန်းအောင်ပြီး အမေရိကန်တက္ကသိုလ် များသို့အရည် ချင်းစစ်စာမေးပွဲဝင်စရာမလိုပဲ တိုက် ရိုက် တင်ခွင့်ပေးနိုင်အောင် ၂၀၁၄တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည် ။ အမေရိကန် ချီကာကိုမြို့တက္ကသိုလ် နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ အိုဟိုင်ရိုတက္ကသိုလ် များမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် ၊ ကျောင်းဆရာများ မြန်မာနိုင်ငံ ILBC ကျောင်းသို့လာရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည် ။ ဆရာအရည် ချင်း၊ တပည့် အရည် အချင်းများကိုသူတို့ကိုယ် တိုင် စစ်ဆေးမေးမြန်းသည် ။ စာကြည့် တိုက် ၊ စာအုပ်အရေအတွက် နှင့် စာအုပ်အရည် အသွေး၊ ကွန်ပြူတာနှင့်အင်တာနက် ၊ ကျောင်းသားများ စားသောက် နေရာများ၊ အနားယူသောနေရာများ၊ စာကြည့် နေရာများ စသည် တို့ကိုစစ်ဆေးပြီး ကျေ နပ်သည် အထိပြုပြင်စေခဲ့သည် ။ ယခုဧပြီလ ၂၀၁၄တွင် ILBC ဆရာဦးတင်မောင်ဝင်းနှင့်အဖွဲ့ အိုဟိုင်းရိုး တက္ကသိုလ် သို့ သွားရောက် တွေ့ဆုံှေဆွးနွေးပြီ၊ တက္ကသိုလ် ၂ခုပူးပေါင်းသင်ကြားရန် လက် မှတ် ထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် ILBC သည် ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိက ကောလိပ်နှင့်၊ တက္ကသိုလ် အဆင့်သို့ ရောက် ရှိလာပြီဖြစ်သည် ။ မြန်မာ့ ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ် ပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုအစဖြစ်သည် ။ လက် တွေ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစာတမ်း လွှတ် တော် သို့တင်သွင်း ILBC ဆရာဦးတင်မောင်ဝင်းသည် ကိုယ် ပိုင်ကျောင်းအတွက် ဆရာဖြစ်သင်တန်းကိုအဓိကထားပြီး ပြုစုပျိုးထောင်သည် ။ လူတိုင်းအတွက် ပညာရေး ဟူသော ဆရာလက် စွဲစာအုပ်ကိုထုတ် ဝေပြီး ဆရာများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည် ။ ဆရာအရည် အသွေးသည် အရေးကြီးလှပါသည် ။ လွှတ် တော် မှပညာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအတွက် လက် တွေ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစာတမ်းကို ပြုစုပြီး။ တင်သွင်းသည် ။ အသိမိတ် ဆွေ ပညာရေးဝါသနာပါသူများနှင့် အချေတင်ဆွေးနွေးရန် ၂လက် မခန့် ထူသော စာအုပ်ကြီးကိုပြုစု၊ ထုတ် ဝေခဲ့သည် ။ ထိုစာအုပ်မျက် နှာဖုံးတွင်ရေးသားထားချက် မှာ- ရမှတ် ဦးတည် လေ့ ကျ င့်ခြင်းမှ ရလဒ် ဦးတင်လေ့ လာခြင်းဆီသို့ ... ဟူသော စကားလုံးကိုစာအုပ်မျက် နှာဖုံးတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည် ။ စာမေးပွဲဦးတည် လေ့ ကျ င့်ရေးမှကျ မ်းမာချမ်းသာအောင်နေတတ် သော၊ ပြည် ထောင်စုသားများ မွေးထုတ် ရေးဆီသို့ ဟူသောဆောင်ပုဒ်ကိုတွေ့ရသည် ။
13. 4/22/2014 ILBC ဦးတင်ေ◌မာင်ဝင်◌း - ◌မြာ့ပည http://mingalaronline.biz/stories/ilbc.tinmaungwin.htm 4/6 ပြည် ထောင်စုလွှတ် တော် ၊ ပြည် သူ့လွှတ် တော် ၊ အမျိုးသားလွှတ် တော် သို့ တင်သွင်းသည့် စာတမ်း၊ စာမျက် နှာ ၇၉၇ ရှိသော စာအုပ်အစိမ်းရောင်တွင် အခန်းပေါင်း ၆၂ခုတင်ပြဆွေးနွေးထားသည် ။ ပညာဟူသည် အတွေ့အကြုံ၊ စိတ် လုပ်ငန်း၅မျိုး၊ အသိဥာဏ် ၈မျိုး၊ ကျွ မ်းကျ င်မှု၊ ဗဟုသုတ၊ ပညာတည် ဆောက် ရေးပျက် ကွက် မှုများ၊ အကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်း၊ ရီပို့ကဒ်စနစ် အားနည်းချက် ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ PSLE စာမေးပွဲနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ iOWA test အကြောင်း၊ ကျောင်းသားမတူညီမှုများ၊ Accessment for Learning (AfL), Assessment of Learning (AoL)၊ မေးခွန်းမေးပြီးအကဲဖြက် စစ်ဆေးခြင်း Assessment၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာများဖြင့် အကဲဖြတ် ခြင်း၊ သင်္ချာပညာအကဲဖြတ် ခြင်း၊ သိပ္ပံပညာအကဲဖြတ် ခြင်း၊ ပထဝီပညာအကဲဖြတ် ခြင်း၊ သမိုင်းဘာသာအကဲဖြတ် ခြင်း၊ အားကစားနည်းပညာအကဲဖြတ် ခြင်း၊ သရုပ်ဖော် ပညာအကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်း၊ ဂီတပညာအကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်း၊ ပုံပြအနုပညာအကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်း။ လူမှုရေးနှင့်တကိုယ် ရေကျ န်းမာရေး အကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်း၊ နိဂုံး နှင့် References, Abbreviations ..စသဖြင့် အခန်း ၆၂ခုဖြင့် ရှင်းလင်းစွာရေးထားပါသည် ။ လူတိုင်းအတွက် ပညာရေး စာအုပ်မှာ ကျောင်းဆရာများလက် စွဲဖြစ်သည် ။ ပညာရေးဆိုသည် မှာ စဉ်းစားတတ် အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အချု့်ဆိုသော အသိဥာဏ် ရှိလျှ င် ကျ န်းမာစွာနေတတ် လာမည် ၊ ချမ်းသာစွာနေတတ် လာမည် ၊ ဤကား ပညာရေး၏အနှစ်သာရပင်ဖြစ်သည် ... ဟုဖေါ်ပြထားသည် ။ အဆိုပါစာအုပ်တွင်မူဆရာများသင်ကြားရန် စဉ်းစားခြင်းများ၊ အသိဥာဏ် အလုပ်လုပ်ပုံ၊ ပညာရေးသမိုင်း၊ သင်ရိုးညွှန်းတန်း၊ ဦးနှောက် အလုပ်လုပ်ပုံ၊ စာမေးပွဲနှင့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဦးနှောက် မှတ် ဥာဏ် ၊ ပညာရေးနှင့်လူဘောင်အဖွဲ့အစည်း၊ ကလေးသူများကဏ္ဍ၊ အမြင်ကျ ဉ်းသောပညာရေးမူဝါဒ၊ ပညာရေးဖြင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ ချရေး၊ အသိဥာဏ် (၈)မျိုး၊ ကျောင်းသား-ဆရာ-မိဘနှင့် အုပ်ချုပ်သူ၊
14. 4/22/2014 ILBC ဦးတင်ေ◌မာင်ဝင်◌း - ◌မြာ့ပည http://mingalaronline.biz/stories/ilbc.tinmaungwin.htm 5/6 တရုပ်ပြည် ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ လူတိုင်းအတွက် ပညာရေး၊ အခြေခံအဆင့် ၁၃နှစ်လိုအပ်ခြင်း၊ ILBC & YIS ကျောင်းများ၏ စနစ်၊ ပညာရေးရှေ့မြော် မြင်ခြင်း၊ ပညာရေး၏လွမ်းမိုးမှုနမူနာများ စသည် တို့ကို ရေးသားထားပါသည် ။ ရည် ရွယ် ချက် နှင့်ဦးတည် ချက် - ကျ မ်းမာ၊ချမ်းသာသော ဘဝကိုရရှိရန် - Social Responsibility လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်သိသိပါဝင်ရန် - Cultural Responsibility လူမျိုး၊ ဘာသာမရွေး တာဝန်သိခြင်း၊ ခွဲခြားမှုမရှိခြင်း စသည့် ရည် ရွယ် ချက် များဖြစ်သည် ။ - Personal ကျောင်းသားများ မိမိကိုယ် ကိုအားကိုးတတ် ရန်၊ မိမိဖာသာစူးစမ်းလေ့ လာပြီး အခြေနေများကို Analyze လုပ်တတ် စေရန် စသည် တို့ဖြစ်သည် ။ နိဂုံး ဆရာဦးတင်မောင်ဝင်းသည် သားအကြီး အမေရိကန်၊ ဖလောရီဒါတက္ကသိုလ် မှဘွဲ့ရရှိပြီး၊ သမီးဖြစ်သူက နယူယောက် ပြည် နယ် တက္ကသိုလ် တွင် ပညာသင်ကြားရန်ရှိပါသည် ။ မိမိသားသမီးများနှင့် အတူနေလိုသော် လည်းပညာရေးအတွက် သားသမီးများကိုပင်လယ် ရပ်ခြားသို့ စေလွှတ် သင်ကြားစေရသည် ။ ဆရာဦးတင်မောင်ဝင်းသည် မြန်မာပြည် အနှံ့ ကျောင်းများသို့ ခရီးဆန့်လေ့ ရှိသည် ။ ရန်ကုန်တွင် ရုံးချုပ်ရှိပြီး မိသားစုအတူရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်လျှ က် ရှိသည် ။ မြန်မာ့ ပညာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးနေသော ILBC ဦးတင်မောင်ဝင်းအား Good Attitude Myanmar စိတ် ဓါတ် မြင့်မြတ် သူမြန်မာလူမျိုးတစ်ဦးအဖြစ် မှတ် တမ်းတင်ပါသည် ။
15. 4/22/2014 ILBC ဦးတင်ေ◌မာင်ဝင်◌း - ◌မြာ့ပည http://mingalaronline.biz/stories/ilbc.tinmaungwin.htm 6/6 ILBC ဦးတင်မောင်ဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ဦးဇော် အောင်၊ ဦးတင်မောင်ဝင်း၊ ဦးမောင်မောင်ထွန်း (၂၁-ဧပြီ-၂၀၁၄)
16. 4/21/2014 ◌မြာန◌ိငံပညာေ◌ရးစနစိုလှမ် http://mingalaronline.biz/stories/university.scholar.myanmar.htm 1/13 ပညာထူးချွန်သူမြန်မာလူငယ် များ၏ တက္ကသိုလ် ပညာရေး သတင်း 6.1.2014 တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီး သူများထဲက ထူးချွန် ကျောင်းသားများအတွက် သီးသန့် ဖွင့်လှစ်ထားသော ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် တွင် လာမည့် ငါးနှစ်အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံမှဧည့် ပါမောက္ခနှစ်ရာကျော် လာရောက် ပို့ချရန် သဘောတူညီမှုရရှိထားကြောင်း ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး နည်းပညာ တက္ကသိုလ် များ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ကော် မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးညီလှငယ် က ပြောကြားသည် ။ ဂျပန် ဧည့် ပါမောက္ခများကိုဘာသာရပ်အလိုက် စေလွှတ် ပေးရန် ဂျပန်အပြည် ပြည် ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရေး အေဂျင်စီ(JICA) က စီစဉ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် အားလုံးအတွက် ရည် ရွယ် ကြောင်း၊ တက္ကသိုလ် ၏ လိုအပ်ချက် ပေါ် မူတည် ပြီး စေလွှတ် ပေးရန် သဘောတူညီထားကြောင်း ၎င်းကထပ်လောင်း ပြောကြားသည် ။ “နိုင်ငံခြားက ဆရာတွေ စေလွှတ် တဲ့ အခါ တကယ် ကျွမ်းကျ င်တဲ့ ဆရာတွေ လွှတ် တာမျိုး ရှိတယ် ။ ဆရာ ဖြစ်ခါစလေးတွေ လွှတ် တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ် ။ အဲ့ ဒီတော့ တကယ် ကျွမ်းကျ င်တဲ့ ဆရာတွေ ဖြစ်နေဖို့တော့ လိုတာပေါ့” ဟုအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားဟောင်း တစ်ဦးက The Voice သို့ ပြောဆိုသည် ။ သင်ကြားရေးအတွက် ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် သည် တိုကျိုနည်းပညာ တက္ကသိုလ် အပါအဝင် ဂျပန်တက္ကသိုလ် ခြောက် ခုနှင့် နားလည် မှုစာချွန်လွှာ ရေးထိုးထားပြီး အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရကျောင်းသားများအတွက် အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်နှင့် အီတလီနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများက ကမ်းလှမ်းမှုအချို့ ရှိကြောင်း အဆိုပါ တက္ကသိုလ် အသိုင်းအဝိုင်းထံမှသိရသည် ။ အနှစ်နှစ်ဆယ် နီးပါး ရပ်နားထားသော ရန်ကုန် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ကို၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်တွင်
17. 4/21/2014 ◌မြာန◌ိငံပညာေ◌ရးစနစိုလှမ် http://mingalaronline.biz/stories/university.scholar.myanmar.htm 2/13 ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအပါအဝင် ပါရဂူတန်းများအတွက် ပြည် ပ တက္ကသိုလ် များနှင့် ကျောင်းသား ဖလှယ် ရေး အစီအစဉ် များလည်းဆောင်ရွက် လျ က် ရှိသည် ။ The Voice Daily, 6.1.2014 **************** ကျောင်းသားဖလှယ် ရေးကိုလှိုက် လှဲ၊ ဝမ်းမြောက် စွာ ထောက် ခံပါသည် ။ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ် ပညာချွန်ဆုများစွာ မြန်မာလူငယ် များ ရရှိဖို့ လူကြီးများတွင် တာဝန်ရှိသည် ။ စင်ကာပူလို တိုးတက် သော် လည်း၊ အနောက် နိုင်ငံများကိုပညာရေးတွင် မယှဉ်နိုင်သေးပါ။ စင်ကာပူအစိုးရပညာချွန်ဆု ၂၀၀ကျော် ၊ အခြားကုမ္ပဏီစပွန်စာများစွာ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ် များသို့ လွှတ် နေဆဲဖြစ်သည် ။ တရုပ်ပြည် အဖို့ လူငယ် များ ထောင်ပေါင်းများစွာ အနောက် နိုင်ငံသို့ ပညာသင်စေလွှတ် နေသည် ။ မြန်မာ့ ထိပ်တန်း ပညာချွန်သူများ ပြည် ပတက္ကသိုလ် ကြီးများက စကောလားရှစ်ပေးရန် နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် လူကြီးအားလုံး ကြိုးစားပေးရပါမည် ။ ပြည် ပတက္ကသိုလ် များက ဆရာများ ခဏလာသင်ပေးခြင်းဖြင့် .. အရည် ချင်းရှိသော ကျောင်းသားဖြစ်ဖို့ မလွယ် လှပါ။ ဆရာများ လစာမလောက် ၊ ကြားပေါက် အလုပ်တွေ လိုက် ရှာနေရလျှ င် တပည့် များလည်း၊ ဆရာလိုအကြံဖန်လုပ်စားချင်စိတ် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည် ။ လက် ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် နှင့် တက္ကသိုလ် ကောလိပ်အားလုံး၊ ဆရာများခန့်ထားရေးကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆက် လက် အုပ်စီးထားပါသည် ။ ဆရာများခန့်ထားရေးနှင့် လစာငွေကြေးများကိုအချို့တက္ကသိုလ် ဥပမာ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် အား ကိုယ် ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမှ တိုးတက် မှုမြန်ဆန်မည် ။ ယခုအခါ ပြည် နယ် တိုင်းအားလုံး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဖက် ဒရယ် မပေးပဲ၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ်ပင် ဖြစ်နေသောကြောင့် တက္ကသိုလ် ကိုယ် ပိုင်အုပ်ချုပ်ဖို့ ဥပဒေမပြင်နိုင်သေးပါ။ မိုးကျ ကိုယ် တော် များလဲ တက္ကသိုလ် ဆရာလောကတွင် အများအပြား ရှိနေပါသည် ။ လက် ရှိပညာထူးချွ န် (ဆရာနှင့်ကျောင်းသား) သူများဘယ် ရောက် နေသလဲ ကျောင်းသားနှင့်ဆရာ (၂)မျိုးခွဲခြားရမည် ဖြစ်သည် ။ သိပ်တော် သူများ ကျောင်းဆရာမလုပ်တော့ ပဲ နိုင်ငံခြားရောက် သွားသည် မှာ ကြာပြီဖြစ်သည် ။ အလားတူကျောင်းသားများလည်းသိပ်တော် လျှ င့် ငွေကြေးထောက် ပံ့သူပေါ်လာသည် နှင့် ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်များတွင် နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ် များသို့ ပညာသင်ထွက် ခွာသွားကြသည် ။ မည် သို့ပင်ဖြစ်စေ ပြည် ပရောက် ထူးခွန်သူမြန်မာဆရာများကိုပြန်ခေါ်ခြင်း၊ ပြည် တွင်းရှိဆရာများကိုနိုင်ငံခြားပညာသင်စေလွှတ် ခြင်း တို့အတွက် ဘတ် ဂျတ် နှင့်စီမံကိန်း ရေးရတော့ မည် ဖြစ်သည် ။ " ယခင်က နိုင်ငံခြားပညာသင် ကမ်းလှမ်းသူများ နိုင်ငံခြားက ပြန်မလာခြင်း၊ အစိုးရက အလွန်စိတ် ဆိုးစွာဖြင့်
18. 4/21/2014 ◌မြာန◌ိငံပညာေ◌ရးစနစိုလှမ် http://mingalaronline.biz/stories/university.scholar.myanmar.htm 3/13 ပြန်လာရင် အနည်းဆုံး ပြန်ထွက် မရအောင်၊ နာမည် ပျက် စာရင်း (ဘလက် လစ်စ်) လုပ်ထားခံရသူ အမြောက် အများ ရှိနေပါသည် ။ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာများစွာ ဝန်ထမ်းပြေး ကျေ ငြာသူများ ပယ် ဖျက် ပေးပြီး ဖြစ်သော် လည်း။ အစိုးရဝန်ထမ်း ပညာတော် သင်လွှတ် ပြီး ပြန်မလာသူများကိုတရားစွဲဆို၊ အရေးယူရန် ဥပဒေ၊ အမိန့်စာများ ထုတ် ထားပါသည် ။ မရုတ် သိမ်းသေးပါ။ " ငွေ၊ အာဏာရှိသော မိဘများသည် သူတို့သားသမီးများကိုနိုင်ငံခြားသို့ ပညာသင်စေလွှတ် ကြသည် ။ ပြီးလျှ င် သူတို့ကုမ္ပဏီမှာ လစာကောင်းကောင်း ပေးပြီး အလုပ်လုပ်စေသည် ။ ပညာထူးချွန်သူကျောင်းသားများအဖို့ အများအားဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ တက္ကသိုလ် ပညာသင်ရန် မိဘမတတ် နိုင်ကြပါ။ ပြည် တွင်း တက္ကသိုလ် များတွင်သာ သင်ကြားနေရပါသည် ။ အချို့လည်းမိဘက ငွေကြေးတတ် နိုင်သော် လည်းစိတ် မချ၍ နိုင်ငံခြားမလွှတ် သည့် ချွင်းချက် များ ရှိပါသည် ။ အောက် ပါ သြစကြေးလျှား၊ နယူးဇီလန် တက္ကသိုလ် ပညာသင်သွားခြင်း ဆောင်းပါးကိုလွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ်က ရေးသားခဲ့ပါသည် ။ ယခုအချိန်ထိမြန်မာပညာထူးချွန်၊ ကြိုးစားသူလူငယ် များအတွက် အသုံးကျ နေဦးမည် ဖြစ်သည် ။ Negative A rticle for Poor Scholars in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးစနစ်ကိုလှမ်းကြည့် ပြီး အားနည်းချက် Negative အတွေးတစ်ခုရလာသည် ။ မြန်မာ့ ခေါင်းဆောင်များ၊ မြန်မာ့ ပညာရေးလောက် သားများ အားလုံး သိပြီးသား အတွေးဖြစ်ပါသည် ။ ကျွ န်တော် ကတော့ ယခုမှတွေးမိပြီး စာရေးလိုက် ပါသည် ။ အထူးသဖြင့် ပညာတတ် ဆိုသူများသည် ယခုအစိုးရသစ် ကာလတွင် ဝင်ငွေတိုးပွားရရှိလာသည် ။ မင်းကိုနိုင် စင်ကာပူစာပေဟောပြောပွဲတွင် ..မြန်မာနိုင်ငံပညာတတ် လောက လူတွေငြိမ်ကျ သွားကြောင်း၊ အခွင့်အရေး ရသော် အခါ ငြိမ်သွားသောကြောင့် ဝိသမ၊ လောဘသမားများ မစို့မပို့ပေးသော ဝင်ငွေ၊အလုပ်ကိုင်များဖြင့် ဟန်ကျ သွားပြီဖြစ်၍ ငြိမ်သွားရခြင်းဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးအတွက် လူရည် ချွန်များ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးတွင် တရားမျှတမှုရှိဖို့ ခဲယှဉ်ပေတော့ မည် ။ ကျွ န်ုပ်ငယ် စဉ်က မ.ဆ.လ အစိုးရလက် ထက် တွင် မှန်ရာပြောစတမ်း ဆိုလျှ င် လူတော် ၊လူကောင်း များစွာ ပညာချွန်ဆု၊ တက္ကသိုလ် တက် ရောက် ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည် ။ နှစ်စဉ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား များစွာ၊ တစ်လ စတိုင်ပင်၊ ထောက် ပံ့ကြေး ကျ ပ်၁၂၀ ရရှိသည် ။ မြောက် များစွာ လစဉ် ကျောင်းလခ လွတ် ငြိမ်းခွင့် ကျ ပ်၃၀ ရရှိသည် ။ ထိုခေတ် က တစ်လ ကျ ပ်၂၅၀-၃၀၀ ဆိုလျှ င် ရန်ကုန်စက် မှု၊ ဆေး တက္ကသိုလ် အဆောင်ကျောင်းသား အဖြစ် ကျောင်းတက် နိုင်သည် ။ အဆောင်စရိတ် ကျ ပ်၁၂၀ သာပေးရသဖြင့်၊ ကျ ပ်၃၀၀ မိဘက ပို့ပေးလျှ င် နေ့တိုင်း လဘက် ရည် ဆိုင် ထိုင်နိုင်ပါသည် ။ လက် ဘက် ရည် တစ်ခွက် ပြာ၆၀ သာပေးရသော ခေတ် ဖြစ်သည် ။ ဒီထက် ရှင်းအောင် ရေးရင် ဦးနေဝင်းက လူကိုလူလိုသိတတ် ပါတယ် ။ သူနဲ့နီးစပ်တဲ့ လူတွေကိုတော့ အသေဆဲဆို၊ ကြိမ်းမောင်း၊ မကြိုက် ရင်ဖြုတ် ပစ်တာပဲ။ ဗမာတွေ အားနည်းချက် ကိုကောင်းကောင်းသိတော့ အာဏာရှင်လုပ်နည်းပါ။ ဦးနေဝင်းခေတ် တမ်းတခြင်းတော့ မဟုတ် ။ အဲဒီတုန်းက တရားဥပဒေ စိုးမိုးလိုက် တာ၊
19. 4/21/2014 ◌မြာန◌ိငံပညာေ◌ရးစနစိုလှမ် http://mingalaronline.biz/stories/university.scholar.myanmar.htm 4/13 လာဘ် စားတယ် ဆိုတဲ့ လူလစာတဲ့ ၁၀ဆထိအောင် မယူရဲ၊ မလုပ်ရဲကြဘူး။ ထောင်ကျ သွားမှာလေ။ အခု ဒီမိုကရေစီစစ်အစိုးရ တရားရေးနဲ့ ဘက် ပေါင်းစုံCorruption & Nepotism တွေနဲ့ အာဏာ၊ငွေအင်အားကို အံတုဝံ့သူဆိုလို့ လယ် သမားနဲ့ မရှိဆင်းရဲသားသာ ကျ န်သည် ။ ထိုအောက် ခြေ ပညာမဲ့လူတန်းစားကို ရဲတပ်အင်အားဖြင့် သူတို့၏ လူစုလူဝေးဆန္ဒပြခြင်းကိုတားဆီးမည် ဖြစ်သည် ။ " ဦးနေဝင်း စစ်အစိုးရ၊ ဦးသန်းရွှေစစ်အစိုးရ ပညာရေးတွင် မည် သူက ပိုဆိုးပါသနည်း..ဟုမေးလျှ င် .. ခေတ် ၂ခေတ် စလုံး မှီလိုက် သူများက ဦးသန်းရွှေစစ်အစိုးရခေတ် အဆိုးဆုံးဟုဖြေကြမည် ။ အသက် ၂၀အောက် လူငယ် များက မသိပါ။ အသက် ၃၀လူငယ် များကလည်းပညာတတ် ၊ လုပ်စားနိုင်သော ခေတ် ဖြစ်သောကြောင့် အာဏာနှင့်ငွေကိုသာ စိတ် ဝင်စားနေကြသည် မှာ ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်သည် ။ " လက် ရှိမြန်မာနိုင်ငံပညာတတ် လူငယ် အလုပ်ကိုင်များ တလောက Ph.D ဘွဲ့ရသူ၊ လွှတ် တော် အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိရာထူး လစာစကေး ၈၀၀၀၀ (ရှစ်သောင်း) ခန့်သည် တပ်မတော် တပ်ကြပ်ကြီး လစာစကေးနှင့် သိပ်မကွာလှသောကြောင့်၊ မြန်မာပြည် ပညာတတ် များကို နှိမ်လှချည် လားဟုအောင်ဒင်ဆောင်းပါး မိုးမခတွင် ဖတ် ရသည် ။ လုပ်ချင်သူများ တန်းစီနေပါသည် ။ အာဏာရှိလျှ င် ငွေအတူပါလာသည့် ယခုခေတ် တွင် ထိုရာထူးလိုချင်သူများစွာရှိမည် သေချာသည် ။ ပညာတတ် Ph.D ဘွဲရသူများစွာလည်းမြန်မာနိုင်ငံ တက္ကသိုလ် များက မွေးထုတ် ပြီး မဟုတ် ပါလား။ သတင်းစာများတွင် အလုပ်ခေါ်မှုကိုကြည့် ပါက ရိုရိုးဘွဲ့ရတစ်ဦးကိုလစာငွေ ၁သိန်းမှ၂သိန်းထိ ပေးပြီးခန့်သည် ကိုတွေ့ရသည် ။ အတွေ့ကြုံရှိသည့် မန်နေဂျာရာထူး အသက် ၃၅နှစ်အောက် ကို၅သိန်းအထိ ပေးပြီး ခန့်သည် ကိုတွေ့ရသည် ။ ထိုသူများသည် နိုင်ငံခြား ကုမ္မဏီများတွင် အလုပ်ရပါက ထိုထက် ၂ဆ လစာရမည် ဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများသည် မြန်မာ ဘွဲ့၊ မာစတာ ပညာအရည် အချင်းများကိုလစာ ၅သိန်းထက် ပိုပြီး မပေးကြပါ။ နိုင်ငံခြားမှဘွဲရလာသူ(သို့မဟုတ် ) နိုင်ငံခြားတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူများဆိုလျှ င် လစာငွေ ဒေါ်လာ တစ်ထောင်၊ နှစ်ထောင် စသဖြင့် ပေးဖို့ ဝန်မလေးကြပါ။ နိုင်ငံခြား အနောက် နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်၊ သြစကြေးလျှားမှဘွဲ့ရလာသူလူငယ် များ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိလျ င် လစာမပေးပါ။ မြန်မာဘွဲရရများထက် အနည်းဆုံး ၅ဆမျှ လစာပိုရမည် ဖြစ်သည် ။ အဘယ့် ကြောင့် နိုင်ငံခြားဘွဲ့ရ၊ နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိသူကိုလစာ မနည်းပေးပြီး ခန့်သနည်း(၁) ထိုသူတို့သည် အင်္ဂလိပ်စကား နားထောင်တတ် သည် ။ ပြန်ပြောတတ် သည် ။ (၂) ထိုသူတို့သည် နိုင်ငံခြားသာများ ပုဂ္ဂိုလ် ရေး၊ အလုပ်ကိုင် နားလည် သဘောပေါက် သည် ။ အလုပ်ကိုလိုရင်း၊ တိုရှင်း လုပ်တတ် သည် ။ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ် များတွင် ၃နှစ်ခန့် ပညာသင်လာသူမှာ နိုင်ငံခြားအကြောင်း နားလည် နေပြီဖြစ်သည် ။ မြန်မာပြည် တွင်နေပြီး နိုင်ငံခြားတစ်ခါ၊တစ်လေ သွားဘူးသူနှင့် အရည် အချင်းကွာခြားသည် ။ ထို့ကြောင့်
20. 4/21/2014 ◌မြာန◌ိငံပညာေ◌ရးစနစိုလှမ် http://mingalaronline.biz/stories/university.scholar.myanmar.htm 5/13 နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများက လစာပိုပေးခြင်းဖြစ်သည် ။့ ကျွ န်ုပ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှလူငယ် ဘွဲ့ရများ အလုပ်ကိုင်၊ ဝင်ငွေကိုလေ့ လာကြည့် ရာ၊ သူတို့တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရများသည် လစာကောင်းသည် ။ စင်ကာပူလစာ ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား - ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၊ ဖိလစ်ပိုင်-ဒေါ်လာ၅၀၀၊ ဗီယက် နမ် ဒေါ်လာ၂၀၀ .. ပျှမ်းမျှရကြသည် ။ ပြည် တွင်း တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရ လစာနှုန်းထားဖြစ်သည် ။ မလေးရှား၊ ထိုင်း ဘွဲ့ရလူငယ် က စင်ကာပူအလုပ်လာလုပ်ပါက ဒေါ်လာ၂၅၀၀ ရမည် ဖြစ်သော် လည်းမလာပါ။ သူတို့နိုင်ငံတွင် နေထိုင်စရိတ် ဈေးချိုသည် ။ ကိုယ့် နိုင်ငံတွင်းမှာ ပျော် စရာကောင်းသည် ။ ထို့ကြောင့် လစာနည်းသော် လည်းစိတ် မညစ်ရသဖြင့် လစာ ၂ဆများပေမဲ့ စင်ကာပူသို့ လာပြီး အလုပ်မလုပ်ကြပါ။ ဗီယက် နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင် ဘွဲ့ရလူငယ် များ လာအလုပ်လုပ်ချင်သော် လည်းသူတို့အတွက် စင်ကာပူကုမ္ပဏီကြီးများက လစာ ဒေါ်လာ၂၅၀၀တန် မခန့်ပါ။ တက် ကနီရှင်အဆင့်နိုမ့် အလုပ်များကိုတစ်လ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ လစာငွေပဲ ပေးချင်ကြသည် ။ အဘယ့် ကြောင့် ဆိုသော သူတို့ပြည် တွင်းက ဘွဲ့ဒီဂရီသည် အပေါစားဖြစ်သည် ။ ဖိလစ်ပိုင်ဘွဲ့ရလူငယ် များသည် အင်္ဂလိပ်စကား မွှတ် နေအောင် ပြောတတ် သော် လည်းပညာရပ်ပိုင်းတွင် မြန်မာပြည် ဘွဲရများနှင့် သူမသာ၊ ကိုယ် မသာ ဖြစ်သည် ။ ဗီယက် နမ်ဘွဲ့ရလူငယ် သည် အတတ် ပညာ ကျွ မ်းကျ င်သော် လည်းအင်္ဂလိပ်စကား သိပ်မတတ် ။ နောက် ဆုံး ကော် နုတ် ချက် ချရလျှ င် မြန်မာဘွဲ့ရလူငယ် များသည် ဗီယက် နမ်ဘွဲ့ရလူငယ် များ အဆင့်နှင့် တန်းတူလောက် ရှိနေပါသည် ။ ပြည် တွင်းဘွဲ့ရများ အလွန်များပြားလှသဖြင့် ကုမ္ပဏီများက လစာများများ မပေးပါ။ လစာ ဆိုရာတွင် ဒေသ၏ လူနေမှုကုန်ကျ စရိတ် နှင့် တိုင်းတာပြီး လစာနှုန်း သတ် မှတ် ပါသည် ။ ဗီယက် နမ် ဘွဲ့ရလူငယ် ကိုဒေါ်လာ၂၀၀ လစာပေးပြီး ခန့်သော် လည်း၊ ထိုလူငယ် သည် ဗီယက် နမ်မြို့ပေါ်တွင် အခန်းစရိတ် ၊ ခရီးစရိတ် ၊ စားစရိတ် သည် ဒေါ်လာ၁၀၀ ဆိုလျှ င် အများနှင့်တန်းတူနေနိုင်သည် ။ ဖိလစ်ပိုင်တွင် စရိတ် ၄ဆခန့် ပိုကြီးသည် ။ လျှ ပ်စစ်ဈေးနှုန်းပင်လျှ င် ဖိလစ်ပိုင်က ဗီယက် နမ်၊ ထိုင်း တို့တထက် ၁၀ဆနီးပါး ဈေးကြီးသည် ။ ဘာသာစကား Language မှာ ၃လခန့်သင်လိုက် လျှ င် တတ် သည် ။ ဂျာမဏီ၊ အမေရိကန် ပညာသင်လွှတ် ပါက ပထမ ၃လ၊ ဘာသာစကား အရင်သင်ပြီး၊ အောင်မှပညာရပ်ဆက် သင်ရသည် ။ အင်္ဂလိပ်စာ ရေး၊ဖတ် ၊ ပြောတတ် ဖို့ ယခု၂နှစ်အတွင် တိုးရစ်ဒေသ ပုဂံ၊ အင်းလေးတွင် ဆေးဆိုင်ရောင်းသူများ အင်္ဂလိပ်စကား အရမ်းကြွမ်းကျ င်လာသည် ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ် မှပိုရောင်းရမှန်း သိသောကြောင့် ကြိုးစားလာသည် ။ အလားတူပြင်သစ်၊ ဂျာမဏီ၊ စပိန်၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း တိုးရစ်လမ်းပြများစွာ ပေါ်လာသည် ။ Foreign Language ပြောတတ် ခြင်းသည် တက္ကသိုလ် လောကတွင် အရေးမကြီး၊ အင်္ဂလိပ်တစ်ခုကောင်းဖို့ပဲလိုသည် ။ ဘွဲ့ရပြီး ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်ရပါက၊ ပြင်သစ်စကား တတ် သွားမည် ပင် ဖြစ်သည် ။ အနှစ်ချုပ်လိုက် လျှ င် ပညာရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလိပ်ကိုအခြေခံရလျှ င် လုံလောက် သည် ။ အာစီယံလဲ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုအခြေခံပါသည် ။
21. 4/21/2014 ◌မြာန◌ိငံပညာေ◌ရးစနစိုလှမ် http://mingalaronline.biz/stories/university.scholar.myanmar.htm 6/13 မြန်မာတက္ကသိုလ် ပညာရေးအခြေနေ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ၊ ဆေးတက္ကသိုလ် ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် များတွင် ပထမနှစ်မှစပြီး စကာတင်၊ ပညာထူးချွန်သူများကိုအဆင့်မြင့်မြင့် ရွေးချယ် ၊ ပညာသင်ပြီး၊ တက္ကသိုလ် ပညာရေး စနစ်ကိုမြှင့်တင်နေပါသည် ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ပေါ်လစီအရ နိုင်ငံခြားမှထူးချွန်သော ဆရာများ အဆိုပါ မြန်မာတက္ကသိုလ် များမှထိပ်တန်း၊ ထူးချွန်သူများကိုဧည့် ပါမေက္ခ၊ ကထိကများအဖြစ် သင်တန်းလာရောက် ပို့ချစေပြီး၊ အဆင့်မြင့် အထက် တန်း ပညာရေးအထောက် ကူပစ္စည်းများ၊ ဖြည့် ဆည်းက တက္ကသိုလ် ပညာရေးကိုမြှင့်တင်မည် ဟုဆိုပါသည် ။ တကယ် လဲ လုပ်ကိုင် ပြသနေသည် မှာ အားရစရာဖြစ်သည် ။ မည် ကဲ့ သို့ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် က သင်ကြားပို့ချပါစေ။ နောင်၎နှစ်နေသောအခါ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရအင်ဂျင်နီယာနှင့်၊ သြစတြေးလျှားနိုင်ငံမှသာမန်တက္ကသိုလ် တစ်ခုမှဘွဲ့ရ အင်ဂျင်နီယာ ၂ဦး အရည် အချင်းမှာ တူမည် မဟုတ် ပါ။ လူသည် ဥဏ် ရည် မြင့်မားသော် လည်းသင်ကြားသော ဆရာ၏ အရည် အချင်း၊ တက္ကသိုလ် ပတ် ဝန်းကျ င်အခြေအနေကိုမူတည် ပြီး ကျောင်းသား၊ တိုးတက် မှုရှိပါမည် ။ သြစတြေးလျှားနိုင်ငံ သာမန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ရရှိသော ပတ် ဝန်းကျ င်ကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ် က မှီရန် နှစ်၂၀ခန့် ကြိုးစားရပါဦးမည် ။ နံပါတ် (၁) ဆရာ လစာ၊ ဆရာအရည် အချင်း မှီအောင် အချိန်ကာလတစ်ခု စောင့်ရဦးမည် ဖြစ်သည် ။ ထိုကြောင့် လူငယ် များ ၁၀တန်းအောင်ပြီး၊ နိုင်ငံခြားသို့ ပညာဆည်းပူးခြင်းသည် ယခုအစိုးရခေတ် တွင် ပိုပြီး များပြားလာမည် ဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံ ထိပ်တန်းကျောင်းသားများအတွက် စကောလားရှစ် များစွာ ကမ်းလှမ်းနေပြီဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံခြား ၄နှစ် ပညာသွားသင်ပြီး၊ ပြန်လာသောအခါ မြန်မာပြည် ရှိ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြီးများက လစာကောင်းကောင်း ပေးပြီး ခန့်မည် ဖြစ်သည် ။ ဟိုး.. လွန်ခဲ့သော အနှစ်၄၀ခန့်က မြန်မာများ နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ် များတွင် မာစတာ၊ ပီအိပ်ခ်ျဒီဘွဲရများရပြီး မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာ
22. 4/21/2014 ◌မြာန◌ိငံပညာေ◌ရးစနစိုလှမ် http://mingalaronline.biz/stories/university.scholar.myanmar.htm 7/13 အလုပ်လုပ်ကြခြင်းမှာ လစာနှင့်ရာထူး နိုင်ငံခြားနှင့်သိပ်မကွာသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ဦးသန်းရွှေ စစ်အစိုးရလက် ထက် တွင် မြန်မာတက္ကသိုလ် ဆရာများ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံခြားပညာသင်ဆု၊ စကောလားရှစ်များဖြင့် ၄နှစ်ပညာသင်သည် ။ ဘွဲရပြီးချိန် ဘလက် လစ် Black List အဖြစ်ခံပြီး၊ ပြန်မလာတော့ ပါ။ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော လစာ၊ ရာထူးအခွင့်ရေးမှာ လူလိုလူလိုမရပဲ၊ ပညာတတ် များသည် အာဏာ၊ငွေရှင်အောက် တွင် အလုပ်လုပ်ရသောကြောင့် ဖြစ်သည် ။ မြန်မာပြည် ပြုပြင်ပြောင်းကာစ ၂၀၁၁တွင် ပြည် တွင်း၊ ပြည် ပ မြန်မာများ အထူးမျှော် လင့်ကြသည် ။ ယခု ၂နှစ်ခွဲကြာသောအခါ ဗီယက် နမ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် သိပ်ထူးခြားမည် မဟုတ် ဟုမှန်းဆမိသည် ။ ဗီယက် နမ်တွင် နေထိုင်စားစရိတ် က ဈေးချိုသောကြောင့် လစာနည်းသော် လည်းလောက် ငှ၊ နေနိုင်သည် ။ မြန်မာပြည် တွင် ယခုကဲ့ သိုCorruption & Nepotism များ အဆမတန်များလာမှု၊ အကျ င့်ပျက် မှုများကို မထိန်းချုပ်နိုင်လျှ င် နောင်အနှစ်၂၀ကြာလျှ င်လဲ မြန်မာပြည် ပညာရေးသည် ဗီယက် နမ်ပညာရေးကို မှီမည် မဟုတ် ပါ။ ဗီယက် နမ်ကလည်းရပ်နေမည် မဟုတ် ။ တိုးတက် နေမည် ဖြစ်သည် ။ မြန်မာပညာရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများအတွက် အထူးလုပ်ဆောင်သင့်သော တက္ကသိုလ် ပညာ ရေတိုစီမံကိန်း တစ်ခုကိုယခုအချိန်တွင် လုပ်ဆောင်ရပါမည် ။ တက္ကသိုလ် ပညာ ရေတိုစီမံကိန်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြည် တွင်း တက္ကသိုလ် များမှအရည် အချင်း ရှိသူဘွဲ့ရများ ထုတ် လုပ်ပြီး၊ အဆင့်မြှင်ရန် အပြောကြီးခဲ့သည် ။ ဟုတ် မလား စောင့်ကြည့် နေရာ၊ ယခုအစိုးရသစ် ၃နှစ်ခရီးရောက် သောအခါ မဖြစ်နိုင်ဟု လုံးဝဆုံးဖြတ် မိသည် ။ ထိုမှအကျ င့်ပျက် များလှသော မြန်မာ့ ဝန်ထမ်းလောကတွင် လစာငွေ နည်းပါးလှသော တက္ကသိုလ် ဆရာများဖြင့် ပညာရေးအဆင့်မြှင့်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဆရာ မထူးချွန်ပါက ၊ တပည့် လည်းထူးချွန်ဖို့ခက် မည် ။်ထို့ကြောင့် ထိပ်တန်း ထူးချွန်သူ၁၀တန်းအောင် လူငယ် များကိုပြည် တွင်းတက္ကသိုလ် များတွင် စုပြုံမနေစေပဲ၊ အချို့ ၃ပုံတစ်ပုံကိုနိုင်ငံခြားပညာသင်ဆု၊ ပညာချွန်ဆု၊ စကောလားရှစ်များ ဖြင့် စေလွှတ် သည့် အစီအစဉ် လုပ်ဆောင်ရပေတော့ မည် ။ နိုင်ငံတော် ဘတ် ဂျတ် မရှိလျှ င် ဘတ် ဂျတ် ရှာဖွေရင်းနှီးရမည် ။ အကောင်းဆုံးသော ရင်းနှီးမြှတ် နှံမှုသည် ပညာရေးဖြစ်သည် ။ ပညာသင်များ ပြန်မလာလဲ ကိစ္စမရှိပါ။ တရုပ်ပြည် တွင် ၃၀% ပြန်လာလျှ င်ပင် တိုင်းပြည် အမြတ် ထွက် သည် ဟုဆိုသည် ။ ပညာသင်ဆုအတွက် ၄နှစ်ကိုမည် မျှကုန်မည် နည်း။ တစ်နှစ်လျှ င် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့အတွက် ဒေါ်လာတစ်သောင်း၊ ၄နှစ်လျှ င် ဒေါ်လာ၎သောင်း ကုန်မည်းကျ ပ်ငွေ သိန်း ၄၀၀မျှသာဖြစ်သည် ။ အားကစား ရွှေတံဆိပ်ရသူကိုပင် ကျ ပ်သိန်း၃၀၀ ဆုချနိုင်လျှ င် ပညာချွန်ကျောင်းသားအတွက် ထိုထက် ၁၀မက ရင်းနှီးသင့်ပေသည် ။ အားကစား ထူးချွန်သူသည် ၁၀နှစ်ပင် နိုင်ငံအတွက် မကစားနိုင်ပါ။ ပညာရည် ချွန်သည် အနှစ်၄၀မက နိုင်ငံတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်သည် ။